Cristiano Ronaldo oo weysiidatay maamulka Kooxdiisa Juventus in loo keeno Mohamed Salah – Gool FM
(Turin) 07 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa la soo warinayaa inuu doonayo in kooxdiisu ay Liverpool kala soo saxiixato Mohamed Salah xagaagan.
Kooxda hanatay horyaalka Talyaaniga ayaa doonaysa inay shaxdeeda xoojiso marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, maadaama ay doonayaa inay markale ku soo laabtaan Champions League oo ay baahi u qabaan ku guuleysigiisa, inkastoo ay siddeed goor oo xiriir ah ku guuleysteen haatan horyaalka Serie A.
Xiddigo dhowr ah sida Mauro Icardi, Matthijs de Ligt iyo Goolhaye David de Gea ayaa diiradda u saaran Juvnetus oo ka mid ah magacyada sare ee ugu jira liiska laacibiinta ay ka rabto suuqa kala iibsiga xiddigaha, halka Salah sidoo kale lala xiriirinayo inuu u soo dhaqaaqo magaalada Turin.
Warsida Don Balon ayaa warinaya in Ronaldo uu weydiistay maamulka kooxdiisa Juve inay soo nooleeyaan xiisaha ay u qabaan garabka xulka qaranka Masar iyo Liverpool ee Mohamed Salah si uu ugula soo biiro kooxdiisa.
Juventus ayaa horay ula soo saxiixatay Aaron Ramsey kaasoo Arsenal kaga soo biiraya suuqa xagaagan, laakiin waxay lumin karaan Paulo Dybala sidaas darteedna waa inay ka fikiraan ciyaaryahanka ay ku bedeli lahaayeen booska weerarka ee xiddigan xulka qaranka Argentina.
Salah ayaa tartan ugu jira sidii uu ugu guuleysan lahaa kabta dahabka ah ee gooldhalinta horyaalka Premier League sanadkiisii labaad oo xiriir ah kaddib markii uu shabaqa gaasiiyey 22 gool oo horyaalka xilli ciyaareedkan.
Goolkii ugu dambeeyey Salah waxa uu kooxdiisa Liverpool u dhaliyey kulankii ay guusha cajiibka ah 3-2 kaga gaareen Newcastle United Sabtidii inkastoo uu ku dhaawacmay kulankaas xiddiga xulka qaranka Masar.
Goolhayaha Man City ee Ederson oo xalay barbareeyey shabaq ilaaliyaha kooxda Liverpool ee Alisson